I-Wholesale 600D Ikhava Yesikebhe Engangeni Manzi I-Fit V-Hull Tri-Hull Ukudoba I-Ski Pro-Style Bass Izikebhe Ukukhiqiza kanye Nemboni |XGEAR
I-600D Ikhava Yesikebhe Engangeni Manzi I-Fit V-Hull Tri-Hull Ukudoba Izikebhe ze-Ski Pro-Style Bass
Ikhava yesikebhe ye-XGEAR 600D Polyester engangeni manzi kanye ne-anti UV universal fit isikebhe eyenziwe ngendwangu ehlala isikhathi eside engu-600D edayiwe ngesisombululo se-PU ephindwe kabili, ukushesha kombala okuphezulu kunikeza isimo sezulu esiphezulu nokuvikelwa komonakalo.Kunezinhlobo eziningi zosayizi ezilingana nosayizi ohlukene wesikebhe.
●IZINTO EZIthuthukisiwe:Isembozo sesikebhe se-XGEAR esisindayo esingangenwa manzi sakhiwe ngendwangu ye-polyester yebanga le-600D esindayo ehlanganiswe ne-urethane.Ilungele isitoreji sesikhathi eside kanye nohambo lomgwaqo onguthelawayeka.
●UKWENZIWA KOBUCHWEPHESHE:Imithungo ephindwe kabili enemichilo iqiniswe kahle ukuze kunciphe amanzi angenayo kusukela ekuthungeni.Inganikeza ukuvikeleka okwengeziwe kwezingxenye ezibalulekile ngokuqiniswa okwengeziwe kokuvikela emakhoneni angemuva, phakathi nendawo nangaphambili.Umswakamo wangaphakathi uphuma kalula ngenxa yamapayipi omoya amabili angemuva.Kukhona futhi umugqa okhanyayo ukuze unikeze ukubonakala okwengeziwe nokuphepha.
●KULULA UKUSEBENZISA:Woza nephakethe lamabhande kanye nesikhwama sokubeka esinemeshi.Intambo ye-elastic emphethweni ongezansi inika ukulingana okuqinile.Amabhakede okukhululwa okusheshayo kanye nesistimu yebhande iqinisekisa ukulingana okulula.Ilungele kokubili i-trailer nesitoreji.
● Ukuze uthuthukise umphumela wokungangeni kwamanzi futhi welule ubude besikhathi sekhava, sincoma kakhulu ukusebenzisa izigxobo zokusekela ukuze ugweme ukuhlanganisana emanzini phakathi nendawo yekhava.
Imodeli C kuphela enomklamo wokusika wamabhodi angaphandle.Imodeli A/B/D/E/F/G/H yakho kokubili amabhodi angaphandle namabhodi angaphakathi.
Indlela Yokukala Isikebhe Sakho:
1. Linganisa Ububanzi Be-Beam: Kala ngomugqa oqondile, oyisicaba ukusuka ohlangothini endaweni ebanzi kakhulu emkhunjini.
2. Kala Ubude Bomugqa Wesikhungo: Isilinganiso esiqondile sisuka phezulu komnsalo siye endaweni ekude kakhulu yengemuva ohlose ukuyivala, okungafanele sifake injini.
Kodwa sicela wenze isiqiniseko sokuthi kuhlanganisa ukubekezelela ukuphakama kwesitimela somnsalo okweqile, amamotho anyathelayo, izitebhisi, nezinkundla ze-transom njll. Ungalinganisi phezulu nangaphezulu kwe-windshield, isihlalo, njll.
3. Hlola ishadi lethu likasayizi: Khetha usayizi ongcono kakhulu ovaliwe ubude nobubanzi besikebhe sakho.
Hambisa Kuye Kusayizi Olandelayo uma isilinganiso sakho siwela ngobude obuningi!
Isincomo:Kungaba ngcono ukusebenzisa i-Boat Cover Support Pole ukuze welule impilo yekhava yesikebhe sakho ngokuvimbela amanzi ukuthi ahlangane phezulu.
Le 600D Polyester trailerable runabout runabout esindayo ikhava yesikebhe ilingana i-v-hull tri-hull yokudoba i-ski pro-style yezikebhe ze-bass ezinosayizi ogcwele.Kulula ukuyisebenzisa:
1. Huka ingaphambili lekhava phezu kwekhala lesikebhe.
2. Yijike eduze kohlaka lwe-trailer bese ufaka ibhande.
3. Qinisa izintambo ngokuphepha futhi ubophe ibhande elidlulele.
4. Isinyathelo sokugcina: hlola yonke ikhava.
Okwedlule: Intambo Yempi Enzima enama-8-ply kanye Nentambo Yokweluka Yokuqeqeshwa Ukuzivivinya
Olandelayo: I-XGEAR 2 ku-1 Foldable Camping Lounge Chair ene-Detachable Side Table ye-Camping Fishing Beach kanye namaPikhinikhi